Maalgashiga Gaadiidka Izmir Waxay Ka heshay Qaybsiga Libaaxa Miisaaniyadda 2020 | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYTurkish Aegean35 IzmirMaalgashiga Gaadiidka Izmir waxay Heshay saamiga Libaaxa ee Miisaaniyadda 2020
29 / 11 / 2019 35 Izmir, tareenka, Turkish Aegean, GUUD, KENTİÇİ Systems Rail, Headline, Metro, TURKEY, taraamka
Qaybta libaaxa ee miisaaniyadda izmir waxay heshay maalgashi gaadiid
Maalgashiga Gaadiidka Izmir Waxay Ka heshay Qayb Libaax Miisaaniyadda 2020; Miisaaniyadda 7 bilyan ee 950 milyan 2020 miisaaniyad ee Degmooyinka Izmir Metropolitan waa laga aqbalay Golaha Dowlada Hoose. Boqolkiiba 32,6 ee miisaaniyadda, oo kordhay boqolkiiba 46 boqolkiiba marka la barbar dhigo sanadkii hore, ayaa loo qoondeeyay maalgashiga. Iyada oo la raacayo miisaaniyadaha İZSU iyo ESHOT, wadarta kharashyada degmada İzmir Caasimad-magaalo ee Magaalada 2020 waxay noqon doontaa 12 bilyan 384 milyan TL.
Miisaaniyadda Sanadeedka 2020 ee Magaalada Izmir ee Magaalo Weynaha waxaa laga aqbalay Golaha Deegaanka Magaalada Izmir. 7 bilyan 950 milyan 46 milyan TL ee miisaaniyadda loo qoondeeyay maalgashiga. Markaa, maaratoonka miisaaniyaddii sedexda maalmood ah wuxuu ku dhammaaday baarlamaanka. Miisaaniyadaha 2 bilyan 989 milyan 481 kun oo ah İZSU Agaasimaha Guud ee Isniinta iyo 1 bilyan 444 milyan 576 milyan oo ah Agaasimaha Guud ee ESHOT ayaa la aqbalay Isniinta. Markay dhaaftay miisaaniyaddii degmada İzmir ee Magaalo-Weyne, wadarta guud ee miisaaniyadda qarashka maamulka degmada İzmir sanadkii 2020 waxay gaartay 12 bilyan 384 milyan TL.
Madaxweyne Soyer wuxuu amaanayaa xafiisyada shaqada
Isagoo hadlaya ka dib lix saacadood oo wadaxaajood miisaaniyadeed ah, Duqa Magaalada İzmir Tunç Soyer wuxuu uga mahadceliyay xubnaha golaha wixii ay soo heleen, dhaleeceyn iyo tabaruc. Duqa Magaalada Soyer wuxuu cadeeyay inay ka faa iidaysan doonaan fikradahan wuxuuna yiri: İzmir Magaalo-Weyne waa degmo aan bixin guryaha kirada iyo lacagta dhismaha. Tani waxay ahayd xaaladdii hore. Ijaarka iyo su'aasha lagama wada hadlin mudada gorgortanka maanta. Waxaan aaminsanahay inaanu ku xoojin doonno 'mzmir' gacanteena gacanta. Waxa na haysta aqoonsi khibrad leh oo xagga dambe ah. 450 waxay leedahay sannado tijaabo ah, oo aan dambi lahayn oo ka tirsan golaha degmoyinka, xafiisyada xafiisyada, madaxweynayaasha. Dhamaantiin waan idinku mahadinayaa ..
Soo gal oo qaado EXPO
Botan Expo ee 2025 ka dibna EXPO 2030'a waxay hiigsanayaan, in kasta oo ay jiraan magaalooyin badan oo EXPO'un ay xasuusineyso Madaxweyne Soyer, gacanta ayey gacanta ku hayaan haddii ay bixiyaan EXPO'yu waxay hoosta ka xariiqeen inay keeni karaan EXPO.
Nasiib wacan Izmir ”
Isaga oo ka hadlaya inta lagu guda jiro wadahadalada miisaaniyada, Gudoomiye kuxigeenka CHm Group CHP Kooxda Mustafa Izuslu Mustafa Ozuslu, sicirka dhaqaalaha, sicir bararka iyo shaqo la aanta ayaa kusoo kordhay jawi fawdo ah oo ku saabsan xaddiga maal gashiga miisaaniyada. Isagoo ku nuuxnuuxsaday inay ka shaqaynayaan sidii 'İzmir looga dhigi lahaa magaalo dunidan', ayuu yidhi Özuslu, ray Maalgelinta nidaamka tareenka ayaa ka muuqata miisaaniyadda. Waxaan rabnaa inaan siinno gaadiid raaxo leh dadkeenna. In kasta oo ay dawladdu maalgaliso nidaamka tareenka ee gobollada qaarkood, kama samayso Izmir. Degmadeena waxay sameyneysaa iyagoo raadinaya agab. Waxaan ka wada shaqeyn doonnaa İzmir kulankaan annagoo dhageysanayna midba midka kale. Dimuqraadiyadda. Waxaan rajeynayaa in miisaaniyaddeena ay faa iido ugu jirto magaaladeena. ”
Waa inaan u sheegno adduunkan adduunka
Madaxtooyada Guest House ee Varyant, oo lagu soo qaaday wadahadalada miisaaniyada, Duqa Magaalada İzmir Duqa Magaalada Tunç Soyer, oo isaguna cadeeyay tagida baaskiilka iyo u safridda dibada, ayaa yiri: waxaan leeyahay labo caruur ah. Waxaan heysanaa nolol caadi ah. 'Waa loo guuray qalcaddii' ayaa la yidhi. Wax sidan oo kale ah ma jiraan. Waxaan ka aasaasnay ​​maktabad casri ah; waxaan ku nool nahay hool sedex qol ah. Gurigeena ugu weyn wuxuu ku yaal Seferihisar. Waxaan u isticmaalnaa meeshan sida jiifka. Baaskiilkeygu sidoo kale ajandaha ayuu ku jiray. Subax walba oo aan baaskiil ku shaqeyaa, waxaan isku dayaa inaan aado meel allabaga ay suurtogal tahay baaskiil. Aragtida duqa magaalada dibeddiisa waa la isla gartay. Waxaan rabnaa inaan Izmir ka dhigno magaalo adduunyo. Kama abuuri kartid magaalo adduun meesha aad ku nooshahay. Hadaanan tagin, waa inaad ii sheegtaa inaan baxo Haddii aanaan bixin, haddii aynaan noo sheegin, magaaladan way sii socon doontaa qalfoofka ”.
Gaadiidka iyo maal-gashiga kaabayaasha dhaqaale hoos uma dhigeyso
Qeybta libaaxa ee 'İzmir Metropolitan Municipal budget, kaas oo koray boqolkiiba 32,6 marka loo eego sanadkii hore, waxaa helay kaabayaasha iyo maalgashiga gaadiidka. 1 bilyan 268 milyan TL ayaa loo qoondeeyay gaadiid ku yaal Izmir. 450 milyan oo loogu talagalay Narlıdere Metro, 100 milyan oo loogu talagalay Buca Metro iyo 97 milyan ginni oo loogu talagalay Çiğli Tram. Khadadka metro-ka halkapınar-Karabağlar wuxuu diyaarin doonaa mashruuca Izmir Metropolitan Municipal, si loo xoojiyo gadiidka Khaliijka 137 milyan oo rodol iyadoo la maalgalinayo doonyo labo baabuur ah Gawaarida cusub ee 140 gawaarida oo leh kun gawaarida 27 ayaa lagu dari doonaa magaalada, waddo baaskiil XNUMX kiilomitir ah ayaa lagu dari doonaa iyo nidaam maarayn gaadiid oo caqli leh.
Miisaaniyada ka badan 2 bilyan ginni ayaa loo qoondeeyay shaqooyinka wadooyinka magaalooyinka iyo miyigaba, dayactirka xaafadaha, wadooyinka iyo wadooyinka, jidadka xad dhaafka ah, gawaarida iyo buundooyinka lugeeya. 73 milyan 400 kun oo TL ah oo ah maalgashiga Homer Boulevard-Bus Station Connection wadada ayaa la dhisi doonaa.
Taageerada beeraha iyo xannaanada xoolaha ayaa kordhin doonta saddex laab
Caddadka taageerada ay Dawlada Hoose ee Magaalada Izmir siin doonto horumarinta Beeraha iyo xannaanada xoolaha ee Izmir iyo horumarka soosaarahu wuxuu ku kordhay jeer 3 jeer marka la barbar dhigo miisaaniyaddii sanadkii hore iyo 68 wuxuu kordhay ilaa TL milyan. Si loo hubiyo koritaanka caafimaad ee carruurta iyo in la taageero soosaarayaasha reer miyiga, Mashruuca Milk Lamb wuxuu gaari doonaa 2020 kun oo carruur ah 160. 15,3 milyan oo caano ah ayaa loo qaybin doonaa. 76 milyan oo rodol oo miisaaniyadda miisaaniyada kheyraadka ah ayaa loo qoondeeyay.
Qaddarka booska cagaaran wuxuu sii kordhayaa kun mitir murabac ah oo ah 500
U diyaar garowga magaalada ka hortagga isbedelka cimilada, biyo-ku-haynta, dib-u-soo celinta deegaanka ee Geeddi Delta, qorshaha waxqabadka magaalada cagaaran ayaa ka mid ah shaqooyinka muuqda. 121 milyan 800 kun oo loogu talagalay dhismaha meelaha cagaaran iyo meelaha lagu madadaasho, 441 milyan oo rodol oo miisaaniyad miisaaniyadeed ah ayaa loo qoondeeyay. Iyada oo aagagga madadaalada cusub ee la dhisi doono, qadarka booska cagaaran uu ku kordhin doono 500 kun oo mitir murabac ah. Ubax xilliyeedka iyo dhirta in loo isticmaalo goobahan waxaa laga iibsan doonaa soosaarayaasha.
Kemeraltı iyo nawaaxigeeda Kemeraltı iyo nawaaxigeeda ayaa kor loogu qaadayaa iyada oo qayb ka ah Mashruuca Taariikhda İzmir. Kaabayaasha gobolka ayaa dib loo cusbooneysiin doonaa. Miisaaniyadda 126 milyan ginni ayaa loo qoondeeyay cusboonaysiinta aagga Kemeralti. Intaa waxaa sii dheer, taageerada maaliyadeed ee la siinayo qoditaanka qadiimiga ah ee socda ee magaalada oo dhan ayaa sidoo kale kordhiyay 2 jeer marka la barbar dhigo sanadkii la soo dhaafay oo wuxuu gaadhay 11 milyan oo rodol.
12 Bilyan Lacag ah La wadaago Nidaamka Gaadiidka ee Miisaaniyadda IBB
Miisaaniyadda 2016 ee qaybta libaax ee nidaamka tareenka
Qaybta libaaxa ee wadada tareenada
Qeybta libaax ee gaadiidka
2019% miisaaniyadda 15 ee Magaalada caasimadda ah ee Izmir waa gaadiidka Gaadiidka
Mashaariicda Lacag Bixinta Lacagta ugu weyn ee Miisaaniyadda Miyiga ee Izmir
Qaybta ugu weyn ee miisaaniyadda gaadiidka ee Mashruuca YHT İzmir-Ankara
Miisaaniyadda Izmir 2020
Maalgashiga Gaadiidka İzmir
Expo Botanical Expo